Как в домашних условиях выращивать дождевых червей - Сад и огород
Как в домашних условиях выращивать дождевых червей
Ataovy izy io — Ahoana no fanaovana azy?
Ny fomba fanaovana zavatra iray, amin’ny tananao manokana — ny tranokalan’ny tompon-trano
Famokarana kankana ao amin’ny tranokala iray — ny tantsaha kambana amin’ny tanana
FAHASALAMANA MASAKA ho an’ny MASTERS AND MANJAKA SY NY FAHALALANA AN’ANDRIAMANITRA, FANAZAVANA FANATSARANA SY FIVAVAHANA HO TRATRANTSIKA NY TANJONA AMIN’NY TAONA 2015! Misy fanamarihana.
Ahoana no hanangonan’ny kankana ao an-trano
Ny antony voalohany mahatonga ny kankana ao an-trano dia ny famoahana ny fako amin’ny fambolena amin’ny tsinainy, dia mamokatra «biohumus» ny taolam-paty — zava-maniry ara-boajanahary mahasoa. Ary ataony haingana kokoa noho ireo micro micro-organismes izay miaina ao anaty tany. Ankoatr’izay, ny kankana dia miteraka bebe kokoa sy bakteria, fungi amin’ny fialam-boly, fikambanana tsotra sy nematodes, izany hoe hanimba bibikely, ary koa ny voan-tsahala. Na izany aza, tsy ny mpamboly rehetra afaka mirehareha amin’ny harena toy ny kankana amin’ny tany na kankana diky. Saingy tsy antony tokony hialana izany. Mamboly kankana izahay an-tsitrapo!
Mamono kankana amin’ny fahalavoana!
Voalohany, amin’ny fotoam-pialan-tsasatra, ankoatra ny dongona, dia misy karazan-tsakafo maro samihafa ho an’ny kankana: voka-pikarohana voajanahary, tops, sampana tapakila, sns.
Faharoa, amin’ny lalitra dia tsy manakana azy ireo tsy hampifanaraka ny lalitra iainana, ny atodiny sy ny lavenony, napetraka amin’ny lohataona, dia mamotika kankana kankana. Fahatelo, amin’ny lohataona — ny vanim-potoanan’ny asa lehibe indrindra amin’ny kankana — dia azo antoka fa hanana vahoaka matanjaka ianao.
Fambolena kambana kankana no manao izany
TOOL HO AN’NY FIANGONANA SY FAMPANDROSOANA, FANDAMINANA SY PR. FANAZAVANA TARI-DALANA
Ny antoko voalohany dia tsy maintsy manomboka amin’ny diky efa antitra, amin’ny fametrahana ny ravina tamin’ny herintaona, tany anaty ala mainty (indrindra fa ny felam-boninkazo, ary ny toerana dia marefo eo ambanin’ny sampana).
Mbola mitoetra ny mametraka sakafo ara-tsakafo eo an-tampony (fako vy sy diky, alim-bodiakoho na taratasy fanasan-dabozia, fa tsy gazety) ary mampiakatra ny tany. Ny ampitson’io, mametraka ny toeram-pambolena ho an’ny fambolena kankana mila milirano.
Alohan’ny hatsiaka isan-kerinandro, ampio fehezam-pejy 10 vaovao cm fanampiny izany — rehefa nahavita ny teo aloha, saprophages dia hitsikera «akaiky kokoa ny lakozia».
Ny loko lehibe indrindra, «fenoina» miaraka amin’ny kankana, dia nesorina tamim-pitandremana ary nampiasaina mba handefa ny ampahany betsaka amin’ny substrate.
Ny bakteria ambany dia biohumus. Amin’ny lohataona, azo ampiasaina amin’ny zavatra ilaina izany — mitombo ny zana-ketsa ao anatiny, mandefa azy amin’ny fambolena lavaka, ampiasao izany ho an’ny orinasa indostrialy.
Rehefa anaty mari-pandrefana dia enina ka hatramin’ny ambaratonga dia mihintsana ny kankana ary miara-misakafo. Mba hanitarana ny asan’ny kankana, mila entina amin’ny mololo ny mololo. Amin’ny fanombohan’ny hafanam-piaramanidina marevaka, mangatsiaka izy ireo, saingy tsy mampidi-doza ho azy ireo izany. Amin’ny lohataona dia lasa mavitrika ny kankana ary te hihinana, noho izany dia tsy maintsy vonona amin’ny fiavonavonana ny faneva.
Famokarana kankana eo amin’ilay tetika (any an-trano)
Misy safidy roa momba ny fampivoarana ny hetsika ao amin’ny chervyatnika: na manery ny orinasa humus mba hiasa bebe kokoa, tsy mitsahatra mikarakara ireo kankana ary mamorona ny fepetra rehetra ho azy any, na ny mamela azy ireo hivoaka amin’ny zaridaina zaridaina. Saingy tadidio fa raha tsy mety ireo kankana ireo, dia mihazakazaka haingana amin’ny mpifanolo-bodirindrina aminy izy ireo.
Noho izany, amin’ny fahalalahan’ny tranokalanao dia tsy maintsy mamorona ny fepetra rehetra izy ireo. Tsy azo atao ny manangona ny tany, fa ny mamaha azy amin’ny lapoaly manokana ihany — tsy voavelona ireo kankana tapaka
Toe-trondro mahafinaritra ho an’ny kankana
Aza ariana fotsiny fa tsy fanafody simika ihany, fa koa lavenona — manimba ny valala.
Ny tsimokaretina dia maty tsikelikely amin’ny tany alika na asidra, fa mialà sasatra tsy miandany.
Ny tany eo amin’ilay tranokala dia tokony ho malefaka, mahaleo ary mena.
Aza mandoro ny fako ao an-jaridaina — ny kankana dia maty tsy ao anaty afo, fa ao amin’ny 5 m koa.
Miadia amin’ny fahavalon’ny kankana, ary maro amin’izy ireo: tandra, tsimoka, rat, kibay, centipedes, kambana, antsaina. Tadidio anefa fa mamono ireo kankana ireo ny pesticides izay manapoizina azy ireo.
Ampiasao ireo mpitsabo biolojika mba hifehezana ny ahi-dratsy. Ny tena izy dia ny biohumus.
Ao amin’ny vermfermah manokana, afaka mividy karazam-borona maitso mena ianao, ohatra, Californiana kankana na mpitrandraka. Mora kokoa sy mahomby kokoa izy ireo. Raha toa kosa anefa ireo mpitrandraka tsy manan-kery dia tsy maintsy ampirimina amin’ny toeram-pivarotana izay azo alefa any amin’ny trano mandritra ny ririnina ny Amerikanina (kankana Kaliforniana).
Torohevitra ho an’ireo izay maniry ny hiteraka kankana ao an-trano:
Ny fanoloana ireo fitaovana efa mahazatra kankana amin’ny sakafo vaovao ao amin’ny garderie, dia tokony hitandrina be ianao.
Tsy afaka manampy trondro maitso sy akoho ianao — aorian’ny fambolena.
Ny kankana dia manampy ny fasika kely ho an’ny komposta, ary manipy an-jaridaina matevina eny ambony.
TOOL FOR MASTERS AND MASTERS, ary TSY MAINTSY ATAO TSARA ARA-DALANA. FREE SHIPPING. RECOMMENDED — CHECKED 100% NOHO FEEDBACK.
Ireto manaraka ireto dia lahatsoratra hafa momba ny lohahevitra hoe «Ahoana no fanaovana azy io — ilay tompon-trano!»
Manorata ny fanavaozana ao amin’ny vondrona misy anay.
Aoka isika ho mpinamana!
Fanamarihana sy fanehoan-kevitra: 5
Raha toa ianao ka manomboka manamboatra valan-javamaniry ao anaty komposta ary manamboatra fepetra tsara ho azy ireo, dia mamela ny famerenana tsimokaretina isan-karazany ary mamerina ny tsoratadidy, hiverina haingana kokoa ny habeny. Na dia izany aza, ny antontam-bolongana lehibe dia tsy toerana tsara indrindra ho an’ny kolon-tsarobidy. Noho ny fizotran’ny fahaverezana dia avo loatra ny mari-pana ao amin’ny orinasa mpamokatra solika, ary ny kankana dia afaka miaina ao akaikin’ny sisiny fotsiny. Amin’ny ririnina, dia mihintsana ny sisiny, ary lasa lalina ao anaty tany ny kankana. Noho izany dia misy biotechnologies manokana ho an’ny fambolena kankana sy ny fikarakarana haingana ny fako. Ity dia antsoina hoe fambolena, avy amin’ny teny hoe vermes — «kankana».
Ao amin’ny indostrian’ny fambolena indostrialy dia manangona karazam-borona miavaka manokana ny karazam-borona manara-penitra. Matetika
ireo kankana Kaliforniana rehetra. Ny vokatra vita amin’ny toeram-pambolena toy izany dia ny biohumus, ary ny kankana mihoatra ny fandefasana entana any amin’ny toeram-piompiana trondro.
Azonao atao ihany koa ny mikolokolo kankana ao an-trano — ao amin’ny lakozia, garage, na amin’ny balcony hafanana. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy milatsaka ambany ambany ny 0 °, fa ny fepetra tsara indrindra dia 15-18 °. Tsy voatery hividy kankana «ravina madio» ianao, fa afaka mihady eny anaty ala fotsiny. Tena mety tsara ny toetr’andro sy ny tany, mba hahafahana mamoaka kankana fanampiny ao amin’ny zaridaina.
Ho an’ny chervyatnik, aza asiana baka hazo kely loatra, ary asio marika miaraka amin’ny banga eo anelanelan’ny boards. Mba tsy hipoitra ny votoatiny, esory ny ao anatiny ao anaty boaty miaraka amin’ny dity, fa fitaovana entin-tanana: sakadia, lutrasil, mena tsara. Tsy mety ny sarimihetsika. Ny sotrokely dia feno tapitrisa feno ravinkazo lavalava, tany, dongona ary voan-kesika. Ny substrate dia mankarary sy miaina kambana kambana maromaro. Ireo boaty dia azo apetraka amin’ny andalana ao amin’ny 3-4. Amin’ny ho avy dia ampiana tsikelikely ny tsimokaretina, ny ahitra, ny legioma, ny sakafom-boaloboka (tsy mila mamolavola karazan-tsakafo fotsiny). Voangona ny tsoratadidy nefa tsy mena. Tsara ny hameno ny chervyatniki amin’ny fahalavoana, ary mandritra ny lohataona fotsiny dia manaisotra fotsiny ny ao anatiny ao anaty kirihitra sy eo am-pandriana.
Tsy nieritreritra mihitsy aho fa tsy maintsy hiatrika ny olana amin’ny fanintonana ny valala any amin’ny dacha, saingy toa tonga ny fotoana.
2 herintaona lasa izay tamin’ny fararano, rehefa nandavaka ny fandriana aho dia nahatsikaritra fa ao amin’ny kianjan’ny 1. Nahita kankana 1-2 tanteraka aho. Ary ny kankana an-kibo — dia nianatra izany tany am-pianarana izany — nanetona ny tany tamin’ny rivotra, nahatonga azy kokoa sy mahavokatra. Ny kankako noho ny antony iray dia nitsambikina . Ilaina ny handraisana fepetra haingana mba hamerenana ny «biby mandady» any an-tanindrazany.
Voalohany indrindra, niparitaka be aho teo am-pandriana, mbola tsy nahavita ny compost, nanipy dite matevina teo ambony, ary avy eo dia nanondraka rano be dia be teo amin’izy rehetra ary nanarona azy tamin’ny lamba rongony. Teny amoron-dalana misy hazo boaty vita amin’ny hazo. Ny kendrà dia maniry ny mikolokolo toy izany. Indray mandeha tamin’ny septambra-Oktobra, 2 dia nanaisotra ny sarimihetsika avy teo am-pandriana ary nanosotra azy tamin’ny diky tamin’ny komposta mba hahafahan’ny kankana hiaina sy handany ny ririnina bebe kokoa.
Ny taona manaraka taorian’ny fijinjana, dia naverina ny dingana manontolo. Ankehitriny dia tsy manana olana aho. Ny kansera dia miverina ao an-jaridainako!
Te-hiresaka fomba tsotra ahafahan’ny kankana aho. Manao lavaka 50 x 50 x 50 cm aho, mametraka ravinkazo lavalava, manosotra ahitra, taratasy matevina kely, sombin-tsangantsanganana boribory, manondraka ny fako ao anaty lakozia ary avelao kely ny valanorano eny amin’ny lavaka. Rehefa afaka herinandro vitsy dia mitombo avo efatra heny na dimy ny isa azony.
Te-hampitombo ny fahalavorariana ho an’ny tany ve ianao?
Tsy misy zavatra mora kokoa — tsy maintsy manaraka ny dian-tongotro fotsiny ianao ary manintona ny valala any amin’ny tranokala, izay mamaha sy manangona ny tany.
Ny kankana dia tia tontolo iainana mando, ka mamoaka zaridaina sy zaridaina an-jaridaina, afa-tsy amin’ny fandriana misy zavamaniry maina.
Manome kankana amin’ny sakafo amin’ny famoahana ny tany amin’ny komposta avy amin’ny herisetra, mololo, ravina, tops ary ny sisa tavela.
Rehefa mandavaka ny zaridaina aorian’ny orana na ny fandroana be dia be, dia miezaha mampiasa boaty, fa tsy lapoaly. Ny kendrina amin’izao fotoana izao dia akaiky ny faritra, ary mety ho tapaka amin’ny lelany izany.
Esory tsy tapaka ny tany: Maty any anaty tany ny kankana.
Mitazona lavenona amin’ny asidra tsy ara-dalàna ny tany.
Manafina ny tany miaraka amin’ny zavamaniry izay mamolavola ny kankana. Saingy mampihoron-koditra ireo mineraly mineraly.
Aza mirehitra ny fako ao amin’ny zaridaina, satria Ao amin’ny toerana misy ny afo dia maty ny kankana ary tsy miverina any mandritra ny fotoana maharitra. Helena
Читать также: Какие семена огурцов можно выращивать на подоконнике
Как в домашних условиях выращивать дождевых червей Ссылка на основную публикацию